कांग्रेस महाधिवेशन : ८०० मत खस्यो, एक जनालाई आधा घण्टा समय ! – Nepal Views
कांग्रेस महाधिवेशन : ८०० मत खस्यो, एक जनालाई आधा घण्टा समय !
विभन्न कल्स्टरहरूमा उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने हुँदा मतदातालाई बढी समय लागेको देखिएको छ। एक जना मतदाताले बढीमा आधा घण्टासम्म समय लगाएका देखिन्छ। यो हिसाबाले मतदान सकिँदा मध्यराति १२ बज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। सोमबार बिहान ८ बजेदेखि शुरु हुने भनिए पनि साढे ११ बजे मतदान शुरु भएको थियो। मतदानअन्तर्गत साढे २ बजेसम्म पाँच तीन औटै बुथमा गरी ८ सय मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
भृकुटीमण्डपमा दुई ओटा र राष्ट्रिय सभा गृह गरी तीन मतदानस्थलबाट निर्धारित समयभन्दा साढे तीन घण्टा ढिलो गरी मतदान शुरु भएको हो।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिका लागि सभापतिसहित १ सय ३४ पदमा झण्डै पाँच सय जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। बेलुका ५ बजेसम्म हुने मतदानमा ४ हजार ७ सय ४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत खसाल्नेछन्।
भर्खरै नेपाली भोट हालेका फर्किएका तथा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारसमेत रहेका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार मतदान गर्न निकै समय लागिरहेको छ। उनले भने, “भोट हाल्न एक जनालाई कम्तीमा आधा घण्टा लाग्ने गरेको छ, यस्तोमा आज मध्यरातसम्म मतदान गरेर सकिँदैन।”
यस्तै शीर्ष नेताहरूले मतदान जारी राखेका छन्। सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाबाहेक सबैले मत दिएका छन्।
२०७८ मंसिर २७ गते १५:१८